पीजीए टूर मा राष्ट्रिय गोल्फ टूर्नामेंट को त्वरित ऋण
पीजीए टूरको राष्ट्रिय टूर्नामेंट
नेशनल 2007 को शुरुवात पीजीए टूर शेड्यूलमा थपिएको थियो, अन्तरराष्ट्रीय , जसले 2006 सीजन पछि सञ्चालन बन्द गर्यो। नेशनल टाइगर वुड्स फाउन्डेशन र वुड्स द्वारा व्यवस्थित गरिएको छ।
टूर्नामेंटले चालकन लोन 2017 टूर्नामेंट पछि प्रायोजन छोड्नु भन्दा पहिले नै क्विकन लोन नेशनल को रूपमा चिनिन्छ। नयाँ शीर्षक प्रायोजक अहिलेसम्म नामकरण गरिएको छैन।
राष्ट्रिय जुलाई जुलाई सप्ताहांतमा खेल्नु वा बन्द गरिएको छ र धेरै गतिविधिहरू सशस्त्र बल र सैन्य परिवारको सम्मान गर्न।
राष्ट्रीय वाशिंगटन, डीसी, क्षेत्र मा राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स मा खेले जान्छ।
जब: जुन 28-जुलाई 1
केली स्ट्यानले पहिलो प्लेऑफ छेदमा टूर्नामेंट जित्यो। स्टेनली र चार्ल्स ह्वाइल तेस्रो77 भन्दा कम 273 भन्दा कम79 वटा प्वाइन्टहरू समाप्त भयो। पहिलो अतिरिक्त प्वाइन्टमा, हुनत हेलेलले टाउको दुख्ने मौका पाएन। यो पीजीए टूरमा स्टेनलीको दोस्रो क्यामेरा जितिएको थियो, 2012 ले उनको पहिलो।
बिली हर्ले तेस्रोले यस कार्यक्रम जितेर आफ्नो पीजी टूरमा पहिलो क्यारियर विजयी गरे। ह्यले 60 को दशकमा चौथो गोलमा 267 रन लिएका थिए, एक स्ट्रोकले टूर्नामेंटको 72-ह्यान्ड स्कोरिङ रेकर्डलाई बाधा पुर्यायो। उनले धावक-अप विजय सिंहको सामने तीन स्ट्रोक पूरा गरे।
राष्ट्रिय टूर्नामेंट रिकर्ड्स को त्वरित ऋण:
72 छेद: 266 - ट्रियो मेरिट, 2015
18 छेद: 61 - ट्रियो मेरिट, 2015
पीजीए टूर त्वरित ऋण राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स:
टूर्नामेंट हाल हाल वाशिंगटन, डीसी बाहिर मैरील्याण्ड मा एवेनेल फारम मा टीपीसी पोटोमेक मा खेलाएको छ
चार्जेन लोन नेशनल इन्जिनियरिङ कन्ट्री क्लबमा पहिले तीन वर्षको उमेरमा खेलेको थियो।
तर कांग्रेसका ब्लू कोर्स 2011 यूएस ओपनको साइट थियो। त्यसोभए 2010-11 को समयमा एटी एन्ड टी नेशनल स्क्वायर (फिलाडेल्फिया क्षेत्र) मा आरोनीमिंक गोल्फ क्लब मा गएर, पी।
2012 मा टूर्नामेंट कांग्रेसमा फर्कियो।
नेशनल ट्रिभिया र नोट्स को त्वरित ऋण:
जब टाइगर वुड्स 2009मा जीते, उनले खिलाडिहरु द्वारा होस्ट टूर्नामेंट को एक टोपी पूरा गरे। मौसममा पहिले, उनले अर्नोल्ड पामर निमन्त्रणा जिते, त्यसपछि ज्याक निकलोस ' स्मारक । उनले 2012 मा एउटै फीट पूरा गरे।
629को प्रतियोगितामा 18-छेद स्कोरिङ रेकर्ड दुई पटक सेट भएको थियो। एन्थोनी किमले पहिलो गोलमा स्कोर गरेपछि हान्टर महानले अन्तिम गोलमा मिलाएको थियो।
तर 2015 मा, ट्रो मेरिटले 18-प्वाइलाइट रेकर्ड 61 को रमाईयो। र उनले टूर्नामेंटको 72-छेद रेकर्ड पनि एक शटमा, 266 सम्म गरे।
पूँजीवादी राष्ट्रिय गोल्फ टूर्नामेंट विजेता:
2017 - केली स्टेनली-पी, 273
2016 - बिली हर्ली III, 267
2015 - ट्रय मेरिट, 266
2014 - जस्टिन गुलाब-पी, 280
2013 - बिल ह्यास, 272
2012 - टाइगर वुड्स, 276
2011 - निक वाटनी, 267
2010 - जस्टिन गुलाब, 270
2009- टाइगर वुड्स, 267
2008 - एंथोनी किम, 268
2007 - केजी चोई, 271
LPGA वार्षिक स्कोरिङ लीडर
डब्ल्युजीसी डेल म्याच प्ले च्याम्पियनशिप
बच्चाहरु ओपन को लागि पीजीए टूर श्रीनर्स अस्पतालों
मास्टर टूर्नामेंटमा कसरी गोल्फ खेलाउन योग्य छन्
1998 यू.एस. ओपन: जेजेनले बेभरको स्टेवर्ट ... फेरि
1 99 1 ब्रित्नी ओपन: ओ'मार्रा च्याम्पसिया प्लेऑफ
1931 पीजीए च्याम्पियनशिप: अनफेरड विजेता, तर अझै पनि रेकर्ड बक्समा
Manulife एलपीजीए क्लासिक
राइडर कप: अमेरिका बनाम युरोप
19औं शताब्दीको वित्तीय प्यानिक्स
उत्तम नि: शुल्क किक टकर्स
बेस्ट डरार्न-हास्य चलचित्र
स्तम्भ आकार कसरी परिवर्तन गर्नुहोस् वा MySQL मा टाइप गर्नुहोस्
कार्यका साथ C # मा बहु थ्रेडिङ
आंशिक संरचनाको परिभाषा
डनोलॉजी र नैतिकता
के भन्नुको अर्थ के हो?
अर्थशास्त्रमा ओकुनको व्यवस्था के हो भन्ने परिभाषा सिक्नुहोस्
ग्लोबल गाँउ के हो?
तपाईले एक लेखकलाई के गर्नुहुन्छ?
CUNY क्वींस कलेज प्रवेश
मनको शान्तिको लागि आज्ञा
मिनेसोटा स्टेट यूनिवर्सिटी मोोरहेड प्रवेश
क्रिस्टचर्च, न्यूजील्याण्डको भूगोल
जल तत्व - धेरै धेरै वा धेरै?
कलेज स्नातक पद घोषणाको लागि एक गाइड
MOREAU उपनाम र उत्पत्ति उपनाम
2015 यामाहा FZ-07: जब ट्विन ट्रम्प्स ट्रिपल
नि: शुल्क बजार अर्थव्यवस्था के हो?
10 मोटरसाइकल खरिद गर्दा खोज्ने कुराहरू
कसरी सुरक्षित राखिएको सुत्ने बरफ
सेप्टेम्बर लेखन प्रोम्प्ट